Football Khabar » बार्सिलोना १३ वर्षपछि भ्यालेन्सियासँग हार्दा …….
बार्सिलोना १३ वर्षपछि भ्यालेन्सियासँग हार्दा …….
स्पेनिस ला लिगा फुटबल प्रतियोगितामा गत राति लिग लिडर बार्सिलोना लिगको २१औं खेलमा भ्यालेन्सियासँग उसको घरमा २–० को लज्जास्पद हार भोग्न बाध्य भयो । लिओनल मेस्सीसहितका प्रमुख खेलाडी लिएर भ्यालेन्सियाको घरमा उत्रिँदा बार्सिलोनाले खराब हार टार्न सकेन ।
यो हारसँगै बार्सिलोनाले अब लिगको शीर्ष स्थान गुमाउने अवस्थाम मात्रै आएको छैन, अवे मैदानमा बार्सिलोना स्तरअनुसार खेल्न सक्दैन भन्ने कुरालाई पुनः एकपटक साबित भएको छ । पछिल्लो समय बार्सिलोना सधैं अवे खेलका कारण आलोचित बन्दै आएको छ ।
१३ वर्षपछि बार्सिलोना मेस्टाल्लामा हार्दा …..
गत रातिको हार बार्सिलोनाका लागि भ्यालेन्सियाको घर मेस्टाल्लामा करिब १३ वर्षपछिको पहिलो हार थियो । सन् २००७ यता सन् २०२० सम्म आइपुग्दा बार्सिलोना भ्यालेन्सियाको घरेलु मैदानमा एकपटक पनि हारेको थिएन ।
तर, गत रातिको हारले मेस्टाल्लामा बार्सिलोनाको अपराजित यात्रामा पूर्णविराम लाग्यो । सो हारसँगै जारी सिजन बार्सिलोनाको प्रदर्शनको स्तर र उपाधि होडमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सन् २००७ को फेब्रुअरीयता भ्यालेन्सियाले बार्सिलोनालाई आफ्नो घरमा कूल १३ पटक डाक्यो । जसमा बार्सिलोनाले मात्रै ५ खेल जित्यो भने ७ खेल बराबरीमा सक्यो । तर, १३औं खेलमा बार्सिलोना २–० को हारको सिकार भयो ।
भ्यालेन्सियाको घरमा सुरुआतबाटै चर्को दबाबमा खेलेको बार्सिलोना निकै निरीह देखिएको थियो । कप्तान लिओनल मेस्सीले १० प्रहार गरे पनि उनको कुनै पनि प्रहारले पोस्टको बाटो देख्न पाएन । उनका चार फ्रि किक प्रहारले यसपटक कुनै जादु देखाउन सकेन ।
भ्यालेन्सियाले खेलको १०औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत् गोल गर्ने मौका पाए पनि बार्सिलोनाका गोलरक्षकले म्याक्सी गोमेजको पेनाल्टी रोकेपछि बार्सिलोनालाई राहत मिलेको थियो । तर, उनै गोमेजले खेलको ४८औं मिनेटमा हानेको प्रहार बार्सिलोनाका जोर्डी अल्बालाई लाग्दै गोल भयो भने ७७औं मिनेटमा गोमेजले नै निकै सुन्दर गोल गरेर बार्सिलोनालाई २–० को हार चखाए ।
यता, भ्यालेन्सिया पहिलो हाफमा पेनाल्टीमा चुक्दा र दोस्रो हाफमा अर्को एक शानदार गोल भिएआरले रद्द गरिदिँदा बार्सिलोनाको भ्यालेन्सियासँग सम्भावित ४–० को फराकिलो हार २–० मा खुम्चियो ।
अब यो हारसँगै बार्सिलोना २१ खेलपछि ४३ अंक जोडेर लिगको शीर्ष स्थानमा यथावत छ । तर, आजै राति रियल मड्रिडले आफ्नो खेल जिते वा बराबरी मात्रै गरे पनि बार्सिलोना दोस्रो स्थानमा झर्नेछ । यता, भ्यालेन्सिया भने बार्सिलोनालाई हराएर सातौंबाट पाँचौं स्थानमा चढेको छ ।
प्रकाशित मिति १२ माघ २०७६, आईतवार २०:३८